गलाती ३ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
३ ए अबुझ गलातीहरू हो, तिमीहरूलाई कसले दुष्टताको प्रभावमा पाऱ्यो? किनकि येशू ख्रीष्ट टाँगिनुभएको विषयमा तिमीहरूलाई पहिल्यै स्पष्टसित वर्णन गरिसकिएको थियो। २ म तिमीहरूबाट केवल यो जान्न चाहन्छु: तिमीहरूले कसरी पवित्र शक्ति पायौ, व्यवस्था पालन गरेर वा आफूले सुनेको कुरामा विश्वास गरेर? ३ के तिमीहरू यत्तिको अबुझ छौ? के तिमीहरू पवित्र शक्तिअनुसार चल्न सुरु गरेर अहिले अन्तमा आएर चाहिं शरीरका काम गर्दैछौ? ४ के तिमीहरूले बेकारमा यत्ति धेरै दुःखकष्ट भोग्यौ? त्यो बेकार थियो भनी म मान्दिनँ। ५ जसले तिमीहरूलाई पवित्र शक्ति दियो र तिमीहरूमाझ शक्तिशाली कामहरू गऱ्यो, के तिमीहरूले व्यवस्था पालन गरेकाले तिनले त्यसो गरेका हुन्‌ वा आफूले सुनेको कुरामा तिमीहरूले विश्वास गरेकाले? ६ अब्राहामले “यहोवामा विश्वास गरे र यसले गर्दा तिनी उहाँको नजरमा असल ठहरिए।” ७ तिमीहरूलाई पक्कै थाह छ, विश्वासअनुसार चल्नेहरू नै अब्राहामका सन्तान हुन्‌। ८ परमेश्वरले अन्यजातिका मानिसहरूलाई विश्वासको आधारमा असल ठहराउनुहुनेछ भनेर पहिल्यै देखेको हुनाले धर्मशास्त्रले अब्राहामलाई पहिल्यै यो सुसमाचार सुनायो: “तिमीद्वारा सबै जातिका मानिसहरूले आशिष्‌ पाउनेछन्‌।” ९ यसकारण, जो विश्वासअनुसार चल्छन्‌, तिनीहरूले विश्वासयोग्य अब्राहामले जस्तै आशिष्‌ पाउँछन्‌। १० किनकि व्यवस्थाबमोजिमको काममा भर पर्नेहरू सबै श्रापित हुन्‌; किनकि यस्तो लेखिएको छ: “मोशाको व्यवस्थाको मुठामा लेखिएका कुराहरू निरन्तर पालन नगर्ने जति सबै श्रापित हुन्‌।” ११ यसबाहेक, व्यवस्थाद्वारा कोही पनि परमेश्वरको नजरमा असल ठहरिंदैन भनेर प्रस्ट छ किनभने यस्तो लेखिएको छ, “परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने मानिस विश्वासद्वारा नै जिउनेछ।” १२ अब मोशाको व्यवस्थाले विश्वासको माग गर्दैन तर यसो मात्र भन्छ, “जसले ती पालन गर्छन्‌, ऊ तिनैले गर्दा बाँच्नेछ।” १३ ख्रीष्टले हामीलाई किन्नुभयो र हाम्रो सट्टामा आफै श्रापित हुनुभएर हामीलाई मोशाको व्यवस्थाको श्रापबाट छुटाउनुभयो किनभने यस्तो लेखिएको छ: “खम्बामा टाँगिएको हरेक मानिस श्रापित होस्।” १४ यसको उद्देश्य यही थियो कि, अन्यजातिले येशू ख्रीष्टद्वारा अब्राहामको आशिष्‌ पाऊन्‌ अनि प्रतिज्ञा गरिएको पवित्र शक्ति हामीले आफ्नो विश्वासद्वारा पाउन सकौं। १५ भाइहरू हो, मानिसहरूको चलनलाई लिएर म एउटा उदाहरण दिन्छु: पक्का भइसकेको करारनामा, चाहे मानिसकै किन नहोस्, कसैले त्यसलाई रद्द गर्न वा त्यसमा थपथाप गर्न सक्दैन। १६ अब प्रतिज्ञाहरू अब्राहाम र तिनको वंशलाई गरिएको थियो। मानौं, धेरै जनालाई प्रतिज्ञा गरिएजस्तो गरी “वंशहरूलाई” भनिएको छैन बरू एक जनालाई मात्र प्रतिज्ञा गरिए जस्तो गरी यसो भनिएको छ: “अनि तिम्रो वंशलाई,” जो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। १७ साथै, म यसो भन्छु: परमेश्वरले पहिल्यै पक्का गरिसक्नुभएको करारनामालाई चार सय तीस वर्षपछि अस्तित्वमा आएको मोशाको व्यवस्थाले रद्द गर्दैन र त्यसले प्रतिज्ञालाई पनि खारेज गर्दैन। १८ किनकि यदि व्यवस्थाले गर्दा उत्तराधिकार पाइन्छ भने प्रतिज्ञाद्वारा पाउने कुरै भएन; तर परमेश्वरले दया गरेर अब्राहामलाई यो उत्तराधिकार प्रतिज्ञाद्वारा दिनुभएको हो। १९ त्यसोभए मोशाको व्यवस्था किन दिइयो त? जसलाई प्रतिज्ञा गरिएको थियो त्यो सन्तान नआउन्जेलसम्म अपराधहरू प्रकट गर्न यो थपिएको थियो; अनि यो स्वर्गदूतहरूमार्फत मध्यस्थकर्ताद्वारा दिइयो। २० जहाँ एउटा पक्ष मात्र हुन्छ, त्यहाँ कुनै मध्यस्थकर्ताको खाँचो पर्दैन तर जब परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो तब उहाँ एक मात्र पक्ष हुनुहुन्थ्यो। २१ त्यसोभए, के मोशाको व्यवस्था परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूको विरुद्धमा थियो? त्यस्तो कहिल्यै नहोस्! किनकि यदि जीवन दिन सक्ने व्यवस्था दिइएको भए व्यवस्थाद्वारा साँच्चै परमेश्वरको नजरमा असल ठहरिन सकिनेथियो। २२ तर धर्मशास्त्रले सबै कुरा पापको हिरासतमा सुम्पिदियो ताकि येशू ख्रीष्टमाथिको विश्वासद्वारा पाइने प्रतिज्ञा, विश्वास गर्नेजतिलाई दिइयोस्। २३ तथापि, विश्वास आउनुअघि व्यवस्थाले हाम्रो रखवाली गरिरहेको थियो, हामी सबै त्यसको हिरासतमा सुम्पिइएका थियौं अनि हामी त्यस विश्वासको बाटो हेरिरहेका थियौं जुन प्रकट हुने निश्‍चित थियो। २४ फलस्वरूप, मोशाको व्यवस्था ख्रीष्टसम्म पुऱ्याउने हाम्रो अभिभावक बनेको छ ताकि विश्वासले गर्दा हामी परमेश्वरको नजरमा असल ठहरिन सकौं। २५ तर अब विश्वास आइपुगेको छ, त्यसैले हामी अभिभावकको अधीनमा छैनौं। २६ ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेकाले तिमीहरू सबै वास्तवमा परमेश्वरका छोराहरू हौ। २७ किनकि तिमीहरू सबै जसको ख्रीष्टमा बप्तिस्मा* भएको थियो, ख्रीष्टलाई धारण गरेका छौ। २८ यसैले तिमीहरू न यहूदी न ग्रीक, न दास न स्वतन्त्र, न पुरुष न स्त्री नै हौ; किनकि तिमीहरू सबै ख्रीष्ट येशूमा एक हौ। २९ यसबाहेक, यदि तिमीहरू ख्रीष्टका हौ भने तिमीहरू साँच्चै अब्राहामका सन्तान र प्रतिज्ञाका उत्तराधिकारीहरू हौ।
^ गला ३:२७ * मत्ती ३:१ को फुटनोट हेर्नुहोस्।